Ben Foster – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Warcraft (2016) Unicode ဒီဇာတျလမျးလေးကို လူအတျောမြားမြာ မြှျောလငျ့နကွေမယျထငျပါတယျ။သာမနျရုပျရှငျပရိသတျတှလေဲ ကောငျးကောငျးကွိုကျကွပွီးWOW ကစားသမားတှအေတှကျတော့ ရှပေါပဲ။လကျရှိမှာတော့ IMDb 6.8 နဲ့ ရပျတညျနပေါတယျ။ ဇာတျလမျးလေးကို အကဉျြးပွောပွရရငျ မူလအစမှာ Human တှနေဲ့Orc တှဟောအခငျြးခငျြးမသိကွ မဆုံဖူးကွသေးပါဘူး။ဒါပမေယျ့ Orc တှရေဲ့ ကမ်ဘာကွီး ပကျြစီးသှားတော့မယျ့အခြိနျမှာOrc မှျောဆရာ Gul’dan ဟာ ဆိုးညဈတဲ့အစိမျးရောငျမှျောပညာ(Fel) ကို သုံးပွီးမှျောမုချဝ(Portal) ကို ဖှငျ့လှဈပွီးAzeroth ကမ်ဘာ ကို Orc တှေ အားလုံးစုစညျးပွီးမြိုးနှယျစု(The Horde) ကွီးတဈခုလုံးကို ချေါလာဖို့ကွိုးပမျးပါတော့တယျ။အဲဒီ Azeroth ကမ်ဘာမှာတော့ Human တှလေူပု(Dwarf) တှေ နတျသူငယျ(Elf) တှဟောတဈယောကျကိုတဈယောကျယုံကွညျမှုမရှိသေး ကွညျ့မရကွပမေယျ့ငွိမျးခမျြးစှာနထေိုငျနခေဲ့တာကွာခဲ့ပါပွီ။ဒါပမေယျ့ အခု ကမ်ဘာနှဈခုက မြိုးနှယျတှေ တှဆေုံ့လာပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျ ရှငျသနျနိုငျဖို့တိုကျခိုကျကွရတော့မယျအခွအေနကေိုရောကျလာတဲ့အခါ…… Human ဘုရငျကွီး Llane နဲ့ သူရဲကောငျး Lothar တို့ပူးပေါငျးပွီးမှျောဆရာ(archmage) Khadgar ရဲ့အကူအညီနဲ့ဘယျလိုရငျဆိုငျကွမလဲ….Orc တှထေဲက တကယျ့ ...
IMDB: 6.8/10 236848 votes
Lone Survivor (2013) ဒီတစ်ခါတော့ စစ်ကားကြိုက်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် စစ်ကားကောင်းတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်…. ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့သလိုပဲ ၂၀၁၄ အစရဲ့ အက်ရှင်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…. ဒီကားက တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန် Red Wings Operation ကို ဇာတ်အိမ်တည်ရိုက်ကူးထားပြီး၊ ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်သားတွေကို အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်…..ဇာတ်လမ်းကတော့ Trailer မှာပါတဲ့အတိုင်း Navy SEAL လေးယောက်က တာလီဘန် ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ကို အပြတ်ရှင်းဖို့ သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ရှိနေတဲ့နေရာကို ဆိတ်ကျောင်းသား သားအဖကရောက်လာ ပြီးတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ Rules of Engagement (စစ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့စည်းကမ်းတွေလို့ ယေဘူယျ ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်) အရ ကလေးတွေ၊ လက်နက်ကိုင် မဟုတ်တဲ့ အရပ်သားတွေကို မသတ်ပဲ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့လိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ရင် သူတို့ နောက်မှာ တာလီဘန် တွေလိုက်လာမှာကို သိရဲ့နဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အထူးလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ Navy SEAL လေးယောက်နဲ့ တာလီဘန် အယောက် ...
IMDB: 7.5/10 245,126 votes